အမျိုးသမီး ( ၅ )ဦးလျှင် ( ၄ )ဦးက လက်မထက်ခင် အတွေ့အကြုံရှိ – Myanmar
အမျိုးသမီး ( ၅ )ဦးလျှင် ( ၄ )ဦးက လက်မထက်ခင် အတွေ့အကြုံရှိ
December 3, 2020 admin Knowledge 0
လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း မပြုမှီမှာပင် အမျိုးသမီး (၅)ဦးလျှင် (၃)ဦးကသူတို့၏ အပျိုစင်ဘဝကို ဘဝကြင်ဖော်မဟုတ်သည့် အခြားတစ်ယောက်နှင့် မျှဝေခဲ့ကြောင်းနှင့် (၅)ဦးလျှင် (၄)ဦးကမူ ကြင်ဖော် သို့မဟုတ် အခြားတစ်ယောက်နှင့် မျှ ဝေခဲ့ကြောင်း ….
FNG ၏လေ့လာမှုစစ်တမ်းတစ်ရပ်အရ သိရသည်။ ရန်ကုန် ၊ မန္တလေးနှင့် နေပြည်တော်မြို့များတွင် ပြုလုပ်သည့် FNG ၏ ” လက်မထပ်မှီ အပျိုစင်ဘ၀ ထိမ်းသိမ်းနိုင်မှု ” စစ်တမ်းတွင် ရန်ကုန်မြို့မှ ၂၄ ဦး ၊ မန္တလေး မြို့ မှ ၁၅ ဦး နှင့် နေပြည်တော်မှ ….
အမျိုးသမီး ရှစ်ဦးက သူတို့၏ အတွေ့အကြုံများကို မျှဝေခဲ့ကြသည်။ နိုဝင်ဘာလအတွင်းက လက်ထပ်ထိမ်းမြှားမှု ပြုခဲ့သည့် ကွန်ပျုတာဆော့ဖ်ဝဲနည်းပညာရှင်အသက် ၂၅ နှစ် အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ” လက်မထပ်ခင် ရည်းစားငါးယောက်ထားဖူးပြီး ငါးယောကလုံးနဲ့အတူ ဆက်ဆံခဲ့ဖူးကြောင်း FNG ကို ပြောသည်။
စစ်တမ်းတွင်ဖြေဆိုသည့် အမျိုးသမီးများ၏ ထက်ဝက်ခန့်မှာ လက်မထပ်ခင် (…..)ကိစ္စ အတွေ့အကြုံ ရှိဖူးရာဉ် နှစ်ယောက်ထက်ပင် ပိုမိုသည်ဟု အဖြေပေးခဲ့ကြသည်။ ရန်ကုန် မြို့မှ ဖက်ရှင်နဲ့ အလှအပရေးရာ မဂ္ဂဇင်းမှာ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကမူ ….
” မိန်းကလေးတွေ လက်မထပ်ခင် (….)ကိစ္စ အတွေ့အကြုံက သိပ်ပြီးတော့ အဆန်းကြီးတော့မဟုတ်တော့ပါဘူး ၊ တစ်ချို့တွေဆို တစ်ပြိုင်တည်း ရည်းစားနှစ်ယောက်ထားတာတို့ (ဘွိုင်းဖရန့်) ရည်စားနှစ် ယောက်နဲ့အတူ အိပ်တာတို့ တောင်ရှိတယ်” ဟုပြောသည်။
မြို့ပြယဉ်ကျေး မှု နှင့် အလှမ်းဝေးသည့် နယ်မြို့များတွင်မူ မိန်းကလေး ဆယ်ဦးလျှင် ရှစ်ဦးက သူတို.၏ အပျိုစင်ဘဝကို ထိမ်းသိမ်းနိုင်ကြောင်း ဖြေကြားခဲ့သည်။
ရန်ကုန် မြို့မှ ဆရာဝန်တစ်ဦးကမူ လစဉ် အသက် ၁၈ နှစ် မှ ၂၈ နှစ် အရွယ် အမျိုးသမီး ဆယ်ဦးခန့်မှာ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချရန်အတွက် လာသည်ဟု သိရသည်။
ရန်ကုန် မြို့ရှိ ဆေးဆိုင်များတွင် သန္ဓေတားဆေး ၊ (….)အကာအကွယ်များမှာ ထိပ်တန်း ၁၀ စာရင်းဝင်ရောင်း အကောင်းဆုံး ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။orginal writer
အမေရိကားမှာ ရုတ်တရက် ပျောက်သွားပြီးအင်တာနက်မှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ ကျောက်သားပြားကြီး ရိုမေးနီးယားမှာ ပြန်ပေါ်လာ